Moments Neshamwari 46
Ndezvipi Colors, Metals uye Matombo Anopihwa kune Izvo Zvirongwa Zvinomwe?
Kune mavara manomwe kune solar spectrum, tsvuku, orenji, yero, girini, bhuruu, indigo, violet. Uku ndiko kukamurwa kwemagetsi ezuva neredhiyo uye sekuratidzwa kuri pamusoro. Iyi minomwe makara inogona kuratidzwa kumashure kune imwe nzvimbo uye zvakare kuve iyo ray yechiedza Iwo mavara anonzi anoenderana nemapuraneti manomwe, mars, zuva, mercury, saturn, jupita, venus, mwedzi. Saka ndozvimwewo zvinomwe simbi, simbi, goridhe, zveshuwa, tungamira, tini, ndarira, sirivheri Ruvara, simbi nemapuraneti zvinonzi zvinoenderana uye zvinowirirana. Matombo, garnet, amethyst, ropa, dhaimani, emerald, agate, ruby, sardonyx, safira, opal, topazi, turquoise, anofanirwa kubatana nemwedzi gumi nemaviri; imwe neimwe inonzi ine zvimwe zvinopesvedzera kana ichipfekwa pane mamwe mazuva, asi zvakanyanya kunyanya mukati memwedzi wayo. Vanyori pazvinhu zvemashiripiti vakapa zvikamu zvakasiyana uye zvinyorwa kune iwo mavara, simbi nemapuraneti. Chero ipi mhando inogamuchirwa, chinangwa chinosarudza kuti ndeupi mutemo uye nzira dzinofanirwa kutevedzwa kuti uwane mabhenefiti nekupfeka, zvakasiyana kana musanganiswa, mavara, simbi nematombo.
Kupfeka Kwemakara, Masimbi nematombo Zvinofanira Kugadziriswa Neakanangana nePuraneti iyoyo Pasi Yemupfekeri Azvarwa?
Kana munhu achitenda mukushanda kwekutenda; kana ane kutenda; kana asingadi kukuvadza vamwe nekupfeka mavara, simbi nematombo — Hongu. Kana achiona ichi chinhu chinosekwa, asi anoedza kuona kuti zvinopera sei; kana achitenda mune hukuru hwemavara, simbi nematombo uye angaapfeka nechinhu kuti chishandise zvisina kukodzera kana zvakaipa zvakaipa pamusoro peche chero — Kwete.
Vane Colours, Metals uye Matombo chero akakosha maitikirwo, uye Vingaitwe Sei Ivo Vakazvarwa Pasinei Nezve Mapurani?
Ruvara, simbi nematombo zvine hunhu hwakakosha, hwakanaka kana hwakaipa. Asi kusimba kwemumwe neumwe wemavara, simbi nematombo zvinogadzwa nemhando yekwaakabva, iyo nzira yekugadzirira kwayo, kana nechisimba chakapihwa kwairi. Mumwe anofarira kuseka pfungwa yekuti mavara ane mamwe maitiro uye kuti achaburitsa zvimwe zvinokanganisa, ane chikonzero chekuchinja maonero ake kana akapfeka jasi dzvuku pamberi penzombe.
Iye murume anoedza magneti haazotore sokunge kungo fanana kana mashura kutaura kwekuti dzimwe simbi dzine mashura ekubata. Hapana munhu anokahadzika kuti kune chishamiso chakajairika chakavezwa nematombo kune vanhu mumazera ese. Kunze kwekubva mune zvehupfumi kana kwekushongedza zvinangwa mavara ane mamwe maitiro pamanzwiro evanhu. Izvo zvinowanzo cherechedzwa kuti kana vamwe vanhu vakapinda mune dzimwe nzvimbo dzezvepfungwa kana dzemanzwiro, ivo vanoona mamwe mavara ayo akafanana neaya mamiriro avo. Semuenzaniso, matsotsi akareurura mhosva anoti vakawona dzvuku pamberi pekomisheni yavo yekuponda. Nekune rumwe rutivi, avo vanopihwa nguva yekufungisisa, vanoti vanoona yero kana goridhe ruvara kana vapfuura vakaita zororo rakadzikama kana rine chinangwa tarisiro.
Metals zvine mashiripiti anokosha uye kukosha, pamwewo nezvezvimwe zvinoshandiswa zvinoshandiswa ivo vanoiswa, saka vane mabwe. Asi tsika idzi dzinofanira kudzidza nekudzidza. Pfungwa dzinofanirwa kuve dzakasvinurira ivo pamberi pekuti tsika dzadzo dzishandiswe zvine simba uye pasina njodzi kumuviri nekufunga. Kudzidza uye kudzidziswa kwakakosha kuti uwane ruzivo rwemashiripiti kukosha uye kushandiswa kwesimbi sosi yesimbi yesimbi. Iye anofungidzira kana ane fungidziro pamusoro pemavara, simbi nematombo, ane pfungwa dzemukati dzisati dzavhurwa, uyo asingazo dzidzise pfungwa dzake uye arambe pfungwa dzake, anogona kuita mukutenda kusingaoni uye kuwana mimwe mhedzisiro, asi achafadza uye ave -Kuseka kuseka, uye iye acharamba ari bofu.
Mumwe anogona kupfeka mavara, simbi kana mabwe asina hanya nemapuraneti kana aine simba iro rakazvarwa neruzivo, uye iro rakakwirira pane chero pesvedzero yemavara, simbi kana matombo. Kutenda kwakasimba uye kusingazungunuke kwekuti hakuna simba rekunze rinogona kumukuvadza, mushonga wekuti chero pesero rinobva pazvinhu zvepanyama. Kutenda uye simba iri rinobva pane chinangwa chakanaka, kufunga kwakarurama, iko kurongeka kwepfungwa. Kana munhu aine izvi, mavara, simbi nematombo, pamwe nepasipasi pesvedzero yavo haigoni kuve neane simba mukurudzira paari. Asi ipapo, pamwe, haafanire kuzvipfeka.
Ndeapi Matsamba kana Nhamba Anosungirirwa kana Seyakanyorwa kune Mapurani?
Tsamba, nhamba, mazita, zvisimbiso, sigels, zvakave zvakasiyana nenzira yekunyorwa kumapuraneti nevanyori pane kuongorora nyeredzi, alchemy uye mashiripiti, uye akasiyana-siyana maakaunzi uye mashandisiro anogona kuwanikwa mumabhuku ari kubata nenyaya idzi. Hakuna chinongedzo pano chinoitwa paruzivo rwakadaro, kana kurudyi rwokuzvipfuudza. Hapana ruzivo rwemashiripiti nezve mavara uye mazita e "mapuraneti" anogona kuendeswa zvakananga kuburikidza nemabhuku kana mafomu akanyorwa. Mabhuku anogona kupa ruzivo rwakawanda, asi haakwanise kupa ruzivo. Zivo inofanira kuwanikwa nekushanda kwega. Zivo inowanikwa nekuisa mhedzisiro yezviitiko pakushandisa kwakanaka. Kuziva kwetsamba, nhamba nemazita kunouya nekuongorora uye kuongorora nekufungisisa nezvezvimiro uye mafomu ezvinyorwa uye kusanganisa kwavo. Kune iye ane hunhu hwepfungwa huri parutivi rwemashiripiti retsamba, manhamba, mazita, zvakanaka kufunga ndokufunga pamusoro pazvo, asi kwete kuyedza kuisa zvirevo izvi kudzamara dzidziso yacho yapa nzvimbo yechokwadi. Chokwadi chinogona kusawanikwa nekufunga nezve uye kudzidzira nemavara, nhamba, mazita, mavara, masimbi kana matombo. Kuvimbika pamusoro peizvi kunouya chete nekugona uye kutonga kwezvinhu kana masimba ayo izvo zviratidzo zvekunze, uye izvo zvinomiririrwa nezvido, zvishuvo uye manzwiro mukati make. Vazhinji vangadai vari maekemistiki nen'anga vauya kuzoshungurudzika nekuti vakaedza kuzadzisa munyika pasina, chii chinofanira kuitwa munyika mukati.
Mavara anooneka ndeanoratidzira enzvimbo dzepfungwa uye manzwiro. Masimbi ndiwo maripiro kana kusimbiswa kwezvinhu zvisingaonekwi nemweya wechinhu chimwe nechimwe chakabatana. Zvimwe chete izvozvo zvinogona kutaurwa nezvemabwe. Masimbi nematombo maginiti kana magetsi. Kupi kwainoenda, chinhu kana mauto akabatana navo anogona kukosheswa uye kuve anoshanda, sesimba remagineti rinoshanda kuburikidza nesimbi, kana sesimba remagetsi rinoitwa ne waya yemhangura. Kupfeka kwemavara, simbi kana matombo kunogona kumutsa uye kunonakidza izvo mukati, zvinoenderana nechinhu kana kumanikidza pasina, uye zvinogona kupinza zvinhu zvakadaro kana mauto kuti aite kuburikidza nekwavo panzwimbo yavo mukati. Nekutonga kwe mukati mukati meizvozvo chete izvo kunze kunogona kudzorwa.